အမွှေစိန်လေး BamBam ကတော့ JB ကို Twitter မှာ ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားမွှေခဲ့ပြန်သလဲဆိုတော့.. | News Bar Myanmar
အမွှေစိန်လေး BamBam ကတော့ JB ကို Twitter မှာ ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားမွှေခဲ့ပြန်သလဲဆိုတော့..
GOT7 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် JB ကတော့ January လ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းကပဲ Twitter account ဖွင့်ပြီး စတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Stage name ဖြစ်တဲ့ Jay B နဲ့ပဲ Account ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ Twitter မှာ အရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ BamBam က ခေါင်းဆောင်အစ်ကိုကြီးကို ဘယ်လိုမျိုး လာရောက်နောက်ပြောင်ရင်း အမွှေစိန်လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသာသိရင် အားလုံးရီမိကြဦးမှာပါ။
JB ရဲ့ Twitter account ဖွင့်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ BamBam ကတော့ အကောင့်စစ်ဟုတ်၊မဟုတ်ကို ခပ်နောက်နောက်မန့်ရင်း သွားစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဆေးရုံတင်မကဘဲ Comment ပေါင်းများစွာနဲ့ JB ကို သွားစနေခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ “Are you real?” ( မင်းက JB အစစ်လား?) ဆိုပြီး သွားမေးခဲ့ပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ Justin Bieber ရဲ့ gif ကို မန့်ရင်း “opps …wrong jb” (JB ချင်းမှားသွားပြီ) လို့ Reply မပြန်မချင်းထပ်မန့်နေပြန်ပါတယ်။ ဘယ််လိုပဲ စနောက်နေပါစေ JB ရဲ့ reply က ပြန်မလာတော့ “ahha~ too scared to reply brother?” (Reply ပြန်ဖို့ကြောက်နေတာလား အစ်ကိုတော်) ဆိုပြီး ဆက်မန့်တဲ့အပြင် နောက်ထပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ gif နဲ့အတူ “okay sorry, i’m out” (Okay လေ ငါတော်ပြီ) ဆိုပြီး တောက်လျှောက်မန့်ရင်း စနောက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး။
ထိန်းမနိုင်တဲ့ BamBam ကြောင့်ပဲ နောက်ဆုံးမှာ JB က “real…” (ငါ အစစ်ပဲ) လို့ Reply ပြန်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကိုပဲ BamBam က “fake…” (အတုကြီး) လို့ ထပ်ပြီး စနောက်နေပြန်ပါတော့တယ်။ ဒါကို JB က “noman… you know what?” (ဟေ့ကောင်..မင်းသိလား?) ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပဲ BamBam တစ်ယောက် ပါးစပ်ပိတ်သွားပါတော့တယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ GOT7 ခေါင်းဆောင်ကြီး JB နဲ့ အမွှေစိန်လေး BamBam တို့ရဲ့ အပြန်အလှန် Comment တွေကိုကြည့်ရင်း အပျော်တွေကူးစက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အမြဲတစေအားပေးနေကြသူတွေကတော့ Twitter မှာ JB နဲ့ BamBam ကြားက ရီစရာအဖြစ်အပျက်တွေကို အများကြီးတွေ့ရဖို့ စောင့်မျှော်နေကြပြီး Twitter တစ်ခွင်မှာ BamBam တစ်​ယောက် သူ့ရဲ့အစ်ကိုကြီး JB ကို ဘယ်လိုတွေ ထပ်မွှေဦးမလဲဆိုတာကို သိချင်နေကြပါတော့တယ်။
Photos: Twitter-official accounts
Next လက်ရှိ ကိုရီးယားမှာ လူပြောများ နာမည်ကြီးနေတဲ့ K-Pop Idol အဖွဲ့ (10) ဖွဲ့ »
Previous « APAN Star Awards ပွဲမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုရရှိခဲ့သူများ (အပြည့်အစုံ)